Utywala: Sisifo se-psychic esenziwa ngumnqweno-kunye nemvakalelo, ngesifo eso umzimba wasemzimbeni wosulelwa kukusela utywala. Utywala bubalasele kwaye buthembekile, ngelixa bugcinwa njengesicaka, okanye busetyenziswa njengesixhobo sokwenza amalungiselelo amayeza. Kodwa utywala, njengomoya, bukhohlakele kwaye abuyehli xa buba yinkosi. Ngumbandela wexesha kuphela, kobu bomi okanye kobunye bexesha elizayo, xa wonke umenzi kuya kufuneka ajongane noloyiso kwaye aloyise okanye aloyise. Utywala abunabungozi, ukuba umntu akabuseli; kuphakathi nje. Kodwa xa umntu esela i-t, umoya wayo utywala uphakathi unxibelelana nomnqweno osegazini kwaye ujonge kwimithambo-luvo kwaye udibanise umnqweno kunye nemvakalelo kwinkolo yokuba ngumhlobo, kwaye le nkolelo iyakhula kwaye iyakhula. Ngumoya wobungqina kunye nobudlelane obulungileyo kuwo onke amabakala okunxila akhokelela kuwo kwixhoba. Kwaye xa umenzi ekugqibeleni enesidima kakhulu ukuba angathatha ifom yomntu, umkhombe uyikhokelela kwintolongo yayo kwiziphelo zangaphakathi zomhlaba, apho igxunyekwe kwi-inertia eyaziwayo. I-inertia eyaziwayo iyothusa kwaye yoyikeka kunemililo eyoyikisayo kuyo nayiphi na inkolo okanye esinye isihogo esinokucingelwa. Utywala ngumoya ogcina indalo; kodwa iyabulala into egcinwe yiyo. Umoya wokunxila woyika ukukhanya koLwazi emntwini, kwaye uzama ukukhubaza umntu. Ekuphela kwendlela eqinisekileyo yokuba yinkosi hayi ikhoboka lomoya wotywala yile: Musa ukungcamla. Yiba nesimo sengqondo esiqinileyo nesichanekileyo kwaye usete ukuba ungayithathi nakuphi na ukuzenzisa okanye uhlobo. Ke omnye uya kuba yinkosi.
Umnqweno wegama, (Udumo): liqoqo lezinto ezibonakalayo ezingabonakaliyo zobuntu, ezingenanto kunye ne-evanescent njengebhola.
indlela yokufa. Umzimba kunye nako konke okuphathelene nomzimba luhlahlo-lwabiwo mali kunye nokutsalwa kwemali okuye kwenzeka kubomi bangaphambili bomntu njengesiphumo sento ebeyicinga noyenzileyo kobo bomi, nekufuneka ajongane nayo kubomi bangoku. Umntu akakwazi ukubaleka into ayiyo umzimba kwaye ayimele. Umntu makayamkele loo nto kwaye aqhubeke nokusebenza njengakwixesha elidlulileyo, okanye umntu angayitshintsha loo nto idlulileyo ayenze kwinto acinga ukuba angayenza, ayenze, kwaye abe nayo.
Isiphelo, uNoetic: yimalini okanye isantya soLwazi lolwazi loko umntu analo ngokwaloo mvakalelo kunye nomnqweno, okhoyo, kuloo nxalenye yomoya wesimo somoya esesimo sengqondo somoya. Esi sisiphumo salo
Urhulumente, ukuzimela: Iziqu zakho, isiqu sakho, sisiphumo seemvakalelo kunye neminqweno yomenzi owaziyo ongaphakathi komzimba womntu kwaye ngubani ophethe umzimba. Urhulumente ligunya, ulawulo kunye nendlela olawula ngayo umzimba okanye urhulumente. Ukuzilawula kuthetha ukuba iimvakalelo neminqweno kabani enokuthi ithambekele, ngokokukhetha, ukuthanda ukuthanda okanye ukuphazamisa umzimba, iya kuthintelwa kwaye ikhokelwe kwaye ilawulwe ziimvakalelo zakho ezingcono kunye neminqweno ecinga kwaye isebenze ngokulungileyo nangengqiqo, njengemigangatho yegunya evela ngaphakathi, endaweni yokulawulwa kukuthandwa nokungathandwa ngokubhekisele kwizinto zovakaliso, ezingamagunya angaphandle komzimba.
ichaphazeleka kukulinganisa kwengcinga yeso sifo kukungaphandle. Ngokususa unobangela, esi sifo siyanyamalala. Ukukhanyela isifo kukuzikholelwa. Ukuba bekungekho sifo ngekhe siphikiswe. Apho kukho impilo, akukho nto ifunyanwa ngokungqina oko sele ikho.
Ulungelo: kuqondwa ngokubanzi kuthetha ukuba iimpawu zomzimba kunye nezengqondo, izinto kunye neempawu zookhokho bakho zidluliselwa kuye kwaye zazuzwa njengelifa ngumntu lowo. Ewe kunjalo, oku kuyinyani kwinqanaba elithile ngenxa yobudlelwane begazi kunye nosapho. Kodwa eyona nyaniso ibalulekileyo ayinikiwanga ndawo. Oko kukuthi, ukuba imvakalelo-kunye nomnqweno womenzi ongafiyo uhlala emzimbeni womntu emva kokuzalwa kwakhe kwaye uzisa ezakhe iingqondo kunye nomlingiswa. Umnombo, ukuzala, okusingqongileyo kunye nemibutho kubalulekile, kodwa ngokomgangatho wayo namandla omenzi wayo uyazahlula kwezi. Uhlobo lokuphefumla lomenzi lubangela ukukhulelwa; ifom inika iiyunithi zomqambi kwaye umoya uphefumlela ngokwazo izinto ezinikezelwe ngumama, kwaye emva kokuzalwa ifom-yokuphefumla iyaqhubeka nokwakha kunye nokugcina eyayo ifom.
UkuKhanya kweNdalo: kukusabela njengokuqaqamba, ukubengezela, ukuqaqamba okanye ukuqaqamba kwemidibaniso yeeyunithi zendalo, kukuKhanya okuNomdla okuthunyelwe kwindalo ngabenzi kwimizimba yabantu.
Unxibelelwano lweeNyunithi, i-Breath-: iyabamba kwaye ibambe iiyunithi ezidlulayo zezinto ezikhazimlayo, kwaye sisiqhagamshelo apho umoya unxulunyaniswe khona neyunithi yekhonkco lobomi beseli yayo.
Isixhobo soqhagamshelwano, i-Life-: ukubamba kwaye kubambe iiyunithi ezidlulayo zezinto zomoya, kwaye sisiqhagamshelo apho ubomi bunxibelelene khona nefom-ikhonkco kunye neeyunithi zekhonkco lokuphefumla
Isixhobo soqhagamshelwano, iFomu-: iyabamba kwaye ibambe iiyunithi ezidlulayo zezinto ezinamanzi, kwaye inxulunyaniswe neseli-ikhonkco kunye neeyunithi zokudibanisa ubomi zeseli yayo.
Unxibelelwano lweeNyunithi, i-Cell-: iyabamba kwaye ibambe iiyunithi ezidlulayo zezinto eziqinileyo, kwaye apho idityaniswe nezinye iiseli kwilungu okanye kwinxalenye yomzimba ekuyo.
"Umphefumlo olahlekileyo," A: Oko kubizwa ngokuba "ngumphefumlo olahlekileyo" ayinguye "umphefumlo" kodwa yinxalenye yenxalenye yabenzi, kwaye ayisosigxina, kodwa okwethutyana, ilahlekile okanye inqunyulwe kubukho bayo kwakhona nakwezinye iinxalenye zomenzi. Oku kuyenzeka xa, kwelinye lamatyala amabini, isahlulo sabenzi siye saqhubeka nokuzingca okugqithisileyo kwaye sasebenzisa ukukhanya okubolekwe kubo ngobuqhetseba, ukubulala, ukonakalisa, okanye inkohlakalo kwabanye kwaye saba lutshaba eluntwini. Emva koko ukuKhanya kurhoxisiwe kwaye isahlulo sabenzi siyayeka ukubakho kwakhona; Iphumle emagumbini omhlaba ekuzithuthumbiseni ide izigqibe, kwaye emva koko iphinde ivele emhlabeni. Ityala lesibini kuxa isahlulo somenzi sichithe ukukhanya ngokuzifica ngokuzonwabisa, ubudlakudla, iziselo kunye neziyobisi, kwaye ekugqibeleni sibe sisidenge esinganyangekiyo. Emva koko eso sahlulo somenzi siya kwigumbi emhlabeni. Ihlala apho ide ivunyelwe ukuba iqhubeke nokubakho kwakhona. Kuzo zombini iimeko, ukuthatha umhlala-phantsi kukhuseleko lwabanye, kunye nokwabo.
Uthando: yi-Conscious Sameness phakathi kwehlabathi; kulowo wenza emntwini, kukuziva-kunye-nomnqweno kwaye njengomnye ngaphakathi nakuwe ngokwakho kunye nomnqweno-kunye-nemvakalelo yesiqu sakho nakwezinye.
Uthando kuMenzi: Yimeko yomanyano olungeleleneyo kunye nokunxibelelana phakathi kokuziva-kunye-nomnqweno, apho umntu ngamnye aziva kwaye azinqwenela ukuba abe yiyo kwaye ekuyo nakwenye.
Ukukhohlisa nokunyaniseka: Umnqweno wokunganyaniseki nokuxoka zizinto ezimbini ezizodwa ezimbi; zihamba kunye. Lowo ukhetha ukunganyaniseki nokuxoka ngumntu othi emva kwamava amade ebomini ahluleke ukubona izinto njengoko zinjalo
kwaye ukutolike gwenxa oko akubonileyo. Ubone ikakhulu awona macala amabi abantu kwaye uziqinisekisile ukuba bonke abantu bangamaxoki kwaye abanyanisekanga, kwaye abo kuhlala kukholwa ukuba bathembekile kwaye banenyani banobuqili obaneleyo bokufihla ukunganyaniseki kwabo nokufihla ubuxoki babo. Esi sigqibo sizala inzondo nokuziphindezela kunye nokuzicingela; kwaye lowo uba lutshaba eluntwini, njengesaphuli mthetho okanye njengobuqili
kunye nokucebisa ngenyameko kwabanye ukuze kulungelwe yena. Nokuba isiqalekiso esikhulu kangakanani emhlabeni ukuba umntu abe, iingcinga zakhe njengekamva lakhe ziya kuthi ekugqibeleni zimtyhile emhlabeni nakuye. Uya kuthi ekuhambeni kwexesha afunde ukuba ukunyaniseka nokunyaniseka kwingcinga nakwizenzo kubonisa indlela eya ekuzazini.
Malice:kukuthambeka ngumoya wentiyo kunye nenjongo embi yokwenzakalisa, ukubangela ukubandezeleka; lutshaba kwintando elungileyo kunye nokwenza okulungileyo.
Imbeko: Isimilo esilungileyo siqhelekile kumlingiswa womenzi; ziyaphuhliswa, azimiliselwa. Ipolishi engenamsebenzi ayiyi kuwufihla umgangatho wemvelo wokuziphatha okuhle okanye okubi, nokuba yeyiphi na isikhundla somenzi ebomini.
Umxholo: yinto ebonakaliswa njengeeyunithi ezingenangqondo njengobunjani, kwaye, eziqhubela phambili ekubeni ziiyunithi ezikrelekrele njenge-Triune Selves.
Phakathi, A: ligama eliqhelekileyo elithetha intsingiselo, iindlela, okanye ukuhambisa. Apha isetyenziselwa ukuchaza umntu onomzimba oqaqambileyo okanye oqaqambileyo ophuma ngaphandle kwaye ukhanyisa imeko-bume etsala naziphi na izinto ezininzi zemvelo, iziqalo, okanye ezibhadulayo emva kokufa kwaye zikhangela abaphilayo. Unxibelelwano ke ngoko lusebenza njengendlela yokunxibelelana phakathi kwalowo kunye nomenzi kwimizimba yabantu.
Imemori: kukuphinda uvelise uluvo olo kuthathwa kulo umbono. Zimbini iintlobo zememori: inkumbulo yengqondo, kunye nenkumbulo yabenzi. Kwimemori-yenkumbulo kukho iiklasi ezine: inkumbulo yokubona, inkumbulo yokuva, inkumbulo yokunambitha, kunye nenkumbulo yevumba. Iseti nganye yamalungu ezivamvo ezine ilungiselelwe ukuthatha uluvo lwento leyo engummeli wayo, kunye nokudlulisa okuvelayo kuloo nto kubhalwe kuyo okushicilelweyo, nokuzaliswa kwayo kwakhona; Emntwini, yindlela yokuphefumla. Ukuveliswa kwakhona komboniso yinkumbulo.
Imemori, uMenzi-: kukuveliswa kwakhona kwemeko yokuziva-kunye nomnqweno wayo kumzimba wayo wangoku, okanye nakweyiphi na imizimba eyakha yahlala kulo mhlaba. Umenzi akaboni, abeva, akanangcamli okanye akanuki. Kodwa umbono, izandi, incasa, kunye namavumba achukumisayo kwifom yokuphefumla isabela kwimvakalelo-nakumnqweno womenzi kwaye ivelise iintlungu okanye ukonwaba, uvuyo okanye usizi, ithemba okanye uloyiko, ukoyikeka okanye ubumnyama. Ezi mvakalelo ziinkumbulo zabenzi bezinto ezonwabisayo okanye uxinzelelo oluye lwenzeka. Kukho iindidi ezine zememori eyenziwa ngabenzi: i-psycho-physical, eyimpendulo yemvakalelo kunye nomnqweno kwiziganeko zomzimba wobomi bangoku; iinkumbulo zengqondo, eziyimpendulo
ukuziva unqwenela indawo kunye nezinto, ngenxa okanye ngokuchasene nayo, ngenxa yeemeko ezifanayo ebomini bokuqala; iinkumbulo zengqondo, ezichaphazela imibuzo yokulungileyo nokungalunganga okanye ukusombulula iingxaki zengqondo okanye
ukuzinzisa iimeko ezingalindelekanga okanye ezingalindelekanga zobomi; kunye nenkumbulo ye-psycho-noetic, ejongene nolwazi lwesazisi, xa ixesha linyamalala ngomzuzwana kwaye umenzi lowo ekwazi ukuzihlukanisa yedwa
Imemori, i-Sense-: ibandakanya (a) amalungu esiso, njengekhamera apho umfanekiso uza kuthathwa khona; (b) uluvo lokubona ekufanele ukuba lwenziwe ngokucacileyo nokubona; (c) into engeyiyo okanye ipleyiti oza kucofwa kuyo umfanekiso lowo, uze uphinde wenziwe kwakhona lo mfanekiso; kunye (d) nalowo ugxila ekuthatheni umfanekiso. Iseti yamalungu okubona sisixhobo esisetyenziselwa ukubona. Ukubona yiyunithi yendalo esetyenziselwa ukuhambisa imbonakalo okanye umfanekiso ojolise kwifom yokuphefumla. Umenzi ngumboni obona umfanekiso ujolise kwifom yokuphefumla. Ukuzaliswa kwakhona okanye inkumbulo yaloo mfanekiso iyazenzekelayo kwaye iphinde iveliswe ngokudibana nento ekufuneka ikhunjulwe. Nayiphi na enye inkqubo yengqondo iphazamisa okanye ithintele ukuvelisa ngokulula okanye inkumbulo. Njengakwimeko yokubona kunye namalungu ayo okubona, kunjalo nangokuva kunye nokunambitha kunye nevumba, kunye nokuzala kwabo njengeenkumbulo. Ukubona yimemori ebonakalayo okanye yokufota; ukuva, ukuviwa okanye imemori yeefonografi; ukungcamla, imemori enomdla; kunye nevumba, inkumbulo olfactory.
Isimo sengqondo kunye nesimo sengqondo:Isimo sengqondo somntu yindlela umntu abujonga ngayo ubomi; Kufana nomoya ojikeleze injongo enkulu ukuba ibe okanye wenze okanye ube nento. Iseti yengqondo yakhe yindlela ekhethekileyo kunye neendlela zokuba okanye zokwenza okanye zokuba nantoni na into ekuyo, ezimiselweyo kunye nokuziswa ngokucinga.
Ukusebenza kwengqondo: yindlela okanye indlela okanye ukusebenza kwayo nayiphi na enye yeengqondo ezintathu ezisetyenziswa ngumenzi-emzimbeni.
I-Metempsychosis: lixesha emva kokuba umenzi wakhe eshiye iHolo yoMgwebo kunye nefom yokuphefumla, kwaye sele engenile kwaye edlula kwinkqubo yentlambululo, apho yahlula khona iminqweno yayo ebangela ukubandezeleka, kwiminqweno yayo engcono eyonwabisayo. I-Metempsychosis iphela xa oku kusenziwa.
Ingqondo: kukusebenza kwemicimbi ekrelekrele. Kukho iingqondo ezisixhenxe, oko kukuthi, iintlobo ezisixhenxe zokucinga ngoButhathu, ngokuKhanya koBukrelekrele, kodwa zinye. Zonke ezi ntlobo zisixhenxe kufuneka zisebenze ngokomgaqo omnye, oko kukuthi, ukubamba ukukhanya ngokuqinileyo kumxholo wokucinga. Zizo: ingqondo yokuziqonda kunye nengqondo yokuzimela kokwazi; ingqondo yokulunga kunye nengqondo yokuqiqa komntu ocinga; ingqondo yokuziva kunye nengqondo yomnqweno womenzi; kunye nengqondo yomzimba ekwasetyenziswa ngumenzi wendalo, nakwindalo kuphela.
Igama elithi "ingqondo" lisetyenziswe apha njengaloo msebenzi okanye inkqubo okanye into eyenziwa ngayo okanye ukucinga ngayo. Ixesha eliqhelekileyo apha kwiingqondo ezisixhenxe, kwaye nganye kwezi sixhenxe yecala lesizathu somcinga we-Triune Self. Ukucinga kukubamba okungagungqiyo kokuKhanya okuNomdla kumxholo wokucinga. Ingqondo ye-I-ness kunye nengqondo yesiqu sakho isetyenziswa ngamacala amabini omazi we-Triune Self. Ingqondo yokulunga kunye nengqondo yokuqiqa zisetyenziswa ngumcinga we-Triune Self. Ingqondo yokuziva kunye nomnqweno-wengqondo kunye nengqondo yomzimba kufuneka zisetyenziswe ngumenzi: ezimbini zokuqala ukwahlula imvakalelo kunye nomnqweno emzimbeni nakwindalo kwaye babe nomanyano olungeleleneyo; Ingqondo yomzimba kufuneka isetyenziswe kwiimpawu ezine, zomzimba kunye nokuhambelana kwayo nendalo.
Ingqondo, Ibhunga-: Eyona njongo yengqondo yomzimba kukusetyenziselwa ukuziva-kunye nomnqweno, ukukhathalela nokulawula umzimba, nangomzimba ukukhokela nokulawula imihlaba emine ngeendlela ezine kunye namalungu azo umzimba. Ingqondo yomzimba inokucinga kuphela ngeemvakalelo kwaye ngokubhekisele kuthintelo lweemvakalelo kunye nomcimbi wovakalelo. Endaweni yokulawulwa, umzimba-wengqondo ulawula imvakalelo kunye nomnqweno ukuze bangakwazi ukwahlula ngokwabo emzimbeni, kwaye ingqondo yomzimba ilawula ukucinga kwabo kangangokuba banyanzelekile ukuba bacinge ngokweemvakalelo endaweni yokuba imigaqo elungele ukuziva-nomnqweno.
Ingqondo, Ukuvakalelwa-: Yiyo leyo uziva ucinga ngayo, ngokwemisebenzi yayo emine. Oku kukuqonda, ukuqonda, ukuqina, kunye nokucacisa. Kodwa endaweni yokusebenzisa ezi zinto ukukhululwa ngokwazo kubukhoboka bendalo, zilawulwa ngengqondo yomzimba ngokwendalo ngokusebenzisa izivamvo ezine: ukubona, ukuva, ukungcamla kunye nevumba.
Ingqondo, Isifiso-: yeyiphi iminqweno ekufuneka uyisebenzisele ukuqeqesha kunye nokulawula imvakalelo kunye nayo; ukuzahlula njengomnqweno kulo mzimba ukuyo; kunye, nokuzisa umanyano lwalo ngokwalo ngemvakalelo; endaweni yoko ivumelekile ukuba ibe phantsi kolawulo lwengqondo yomzimba ekukhonzeni izivamvo kunye nezinto zendalo.
Ukuziphatha: Zimisele kwinqanaba lokuba iimvakalelo kunye neminqweno yomntu zikhokelwa lilizwi elingenasazela lesazela entliziyweni malunga nento ongayenziyo, nangogwebo oluvakalayo lokuqonda, malunga nokuba wenzeni. Ke, ngaphandle kokutsala kweemvakalelo, indlela ubani aziphatha ngayo ithe tye kwaye ilungile, ngokubhekisele kuye nasekuqwalaseleni abanye. Ukuziphatha komntu kuya kuba yimvelaphi yesimo sakhe sengqondo.
Mysticism: Kukukholelwa okanye ngumzamo wobudlelane noThixo, ngokucamngca okanye ngokuziva usondele, ubukho okanye ukunxibelelana noThixo. Iimfihlakalo ziphuma kuzo zonke iintlanga kunye neenkolo, kwaye ezinye azikho inkolo ekhethekileyo. Iindlela zabo okanye imikhwa yabo yahlukile kuthule cwaka ukuya kwimithambo yomzimba enogonyamelo kunye nezikhuzo kunye nokushiyeka komntu ngamnye ukuya kwimiboniso emininzi. I-Mystics ihlala inyanisekile kwiinjongo zabo nakwiinkolelo zabo kwaye banyanisekile kwimithandazo yabo. Banokuvuka ngequbuliso kukonwaba kwiindawo eziphakamileyo, kwaye batshone kubunzulu bexinzelelo; amava abo anokuba mafutshane okanye ayolule. Kodwa la ngamava kuphela eemvakalelo kunye neminqweno. Ayizizo iziphumo zokucinga okucacileyo; abanalo ulwazi. Oko bakuthatha njengokwazi ngoThixo okanye ukusondela kuThixo kuhlala kunxulunyaniswa nezinto ezibonakalayo, zokuva, zokungcamla okanye zokujoja, ezizezona zivamvo — hayi ezobuqu, okanye ezobukrelekrele.
Uhlobo: Ngumatshini oqulathe iyonke yeeyunithi ezingenangqondo; iiyunithi eziyaziyo njengemisebenzi yazo kuphela.
Kubalulekile: ikamva, isenzo esinyanzelayo, esihlala sikho kwangoko, apho kungekho kuphuncuka koothixo okanye abantu.
Umzimba oPheleleyo: Yimeko okanye imeko eyeyona iphambili, igqibelele; ekungekho nto inokulahleka kuyo, kungekho nto inokongezwa kuyo. Unjalo ke umzimba opheleleyo ongabelani ngesondo woMntu oziqu zithathu kwi-Realm ye
Impahla: ziyimfuneko njengokutya, impahla, indawo yokuhlala, kunye neendlela zokugcina ubuntu bakho busendaweni yabo ebomini; ngaphezulu koku kwaye kuzo zonke ezinye iimeko bayimigibe, inkathalo, kunye namakhamandela.
Pranayama: Ligama lesiSanskrit elixhomekeke kutoliko oluninzi. Ukusebenza ngokwenyani kuthetha ukulawulwa okanye ukulawulwa kokuphefumla ngokwenza imithambo emiselweyo yokulinganisa inhalation, ukunqunyanyiswa, ukukhutshwa komphefumlo, ukunqunyanyiswa, kunye nokuphinda ungene ngaphakathi kwinani elithile lemijikelo leyo okanye ixesha elithile lexesha. KwiYoga Sutras yasePatanjali, ipranayama inikwa okwesine kumanqanaba asibhozo okanye kumanqanaba eyoga. Injongo ye-pranayama kuthiwa kukulawula i-prana, okanye ulawulo lwengqondo kuxinzelelo. Nangona kunjalo, ukuziqhelanisa ne-pranayama kuyayiphazamisa kwaye yoyise injongo, kuba ukucinga kubhekiswa kuyo okanye ekuphefumlweni okanye kwiprana, kunye nokuma ekuphefumleni. Oku kucinga kunye nokuyeka ukuphefumla kuthintela ukucinga okwenyani. UkuKhanya okuSebenzayo okusetyenziswe ekucingeni-ukwazisa umntu ocinga ngengqondo yokucinga kwakhe-kuthintelwe ukuba kungahambi ngokumisa ukuhamba kwendalo kunye nokuhlala kuphefumla ngokwasemzimbeni. UkuKhanya okuNomdla kungena kuphela kwiindawo ezimbini ezingathathi hlangothi phakathi kokuqhambuka kunye nokuqhambuka kunye nokuqhambuka kunye nokuqhekeka. Ukumiswa kugcina ukukhanya. Ngenxa yoko, akukho Khanya; akukho ukucinga okwenyani; akukho yoga yokwenyani okanye umanyano; akukho lwazi lokwenyani.
Ukuhlaziywa kwakhona: kukuguqulwa kwesizukulwana, ukuzala komzimba. Oku kuthetha ukuba: iiseli zentsholongwane emzimbeni zisetyenziselwa ukungazisi omnye umzimba emhlabeni kodwa ukutshintsha kwaye kunike ubomi obutsha kunye nomgangatho ophezulu wobomi emzimbeni. Le yenye yokwakha umzimba ukusuka kumzimba ongaphelelanga oyindoda okanye owasetyhini ube ngumzimba opheleleyo nogqibeleleyo ongabelananga ngesondo, okufezekiswa kukungonwabisi iingcinga zesondo okanye ukucinga ngezenzo zesondo; kunye nesimo sengqondo esiqhubekayo sokuvuselela umzimba womntu kwimeko egqibeleleyo ovela kuyo.
Umphefumlo: Into engenasiphelo yeenkolo kunye nefilosofi, ngamanye amaxesha kusithiwa ayinakufa kwaye ngamanye amaxesha kuthiwe ingaphantsi kokufa, imvelaphi kunye nekamva lakhe kuye kwabalwa ngokwahlukeneyo, kodwa oko bekuhlala kuluncedo lokuba yinxalenye okanye enxulumene nomntu umzimba. Yifom okanye icala elingenzi nto lokuphefumla komzimba wonke womntu; icala layo elisebenzayo ngumoya.
Umenzi-emzimbeni-we-spasmodic kwaye akazinzanga ekucingeni; Ukuziva-nomnqweno-weengqondo akusoloko kuvumelana, kwaye ukucinga kwabo kulawulwa yingqondo yomzimba ocinga ngokusebenzisa izivamvo kunye nezinto zezimvo. Kwaye, endaweni yokuKhanya okucacileyo, ukucinga kwenziwa rhoqo enkungwini kwaye nokuKhanya kusasazeke enkungwini. Nangona kunjalo, impucuko emhlabeni sisiphumo sokucinga kunye neengcinga eziyenzileyo. Ngaba abanye babenzi kwimizimba yabantu bebeyazi ukuba abafiyo, kwaye ukulawula endaweni yokulawulwa, ziingqondo zabo zomzimba, banokuwuguqula umhlaba ube ngumyezo ngandlela zonke ophakamileyo iparadesi.
Ukucinga Okungekho Ukudala Imicabango, Okokuthi, Ukuphela: Kutheni umntu ecinga? Ucinga ngenxa yokuba iingqondo zakhe zimphoqa ukuba acinge, malunga nezinto zeengqondo, ngabantu kunye neziganeko, kunye nendlela awaphendula ngayo. Yaye xa ecinga ukuba ufuna ukuba yinto ethile, ukwenza into, okanye ukufumana okanye ukufumana into ethile. Ufuna! Kwaye xa efuna uzimanya nokuKhanya kwingcinga, kwinto ayifunayo; udale ingcinga. Oko kuthetha ukuba ukuKhanya ekucingeni kwakhe kudityaniswe nomnqweno wakhe ofuna, kumcimbi nakwindlela yokwenza, okanye kwinto okanye into ayifunayo. Ngale ngcinga uncamathisele kwaye wabopha ukuKhanya kunye naye. Kwaye ekuphela kwendlela anokuthi akhulule ngayo ukuKhanya kunye nesiqu sakhe kuloo ntambo kukuba kunganxityelelaniswa; Oko kukuthi, kufuneka alungelelanise ingcinga embophelelayo, ngokukhulula ukuKhanya kunye nomnqweno wakhe kuyo ufuna. Ukwenza oku, kuhlala kuthatha ubomi obungenakubalwa, iminyaka, ukufunda, ukuqonda; ukuqonda ukuba akanakusebenza kakuhle nangokukhululekileyo ngento aqhotyoshelwe kuyo kwaye aboshwe kuyo, njengoko enako ukuba ebengaqhotyoshelwanga, engabotshiwe. Umnqweno wakho ngu kuwe! Intshukumo okanye into oyifunayo ayinguwe. Ukuba uncamathisela kwaye uzibophelele kuyo ngengcinga, awunakho ukwenza ngokungathi awubotshelelwanga kwaye ukhululekile ukuba wenze ngaphandle kokuncamathisela. Ke ngoko, ukucinga okungazenzi iingcinga kukukhululeka ekucingeni, kwaye ungafuni, ukubamba, kodwa ukwenza, ukubamba, ngaphandle kokubophelela kwisenzo, kwinto onayo, kwinto bamba. Oko kukuthi, ukucinga ngenkululeko. Emva koko unokucinga ngokucacileyo, ngokuKhanya okucacileyo, nangamandla.
Iyunithi, A: yinto engacazekiyo nengabonakaliyo, isangqa, esinecala elingabonakaliyo, njengoko kubonisiwe ngobubanzi obuthe tyaba. Icala elibonakalalisiweyo linecala elisebenzayo nelokungena, njengoko kubonisiwe ngumgca ophakathi nkqo. Utshintsho olwenziwe kukunxibelelana kwabo lwenziwa bubukho bokungabonakali kubo bobabini. Yonke into inamandla okuba yinto yokwenyani-Ukuqonda-ngokuqhubeka kwayo rhoqo ukuze ube nolwazi ngalo lonke ixesha